ခရစ်သက္ကရာဇ် (၁၆၀၅)ခုတွင် မဟာဓမ္မရာဇာ (အနောက်ဘက်လွန်မင်း) အင်းဝထီးနန်းကို စိုးစံတော်မူသည်။ (၁၆၁၃)ခုတွင် သန်လျင်၌ နယ်ချဲ့ ခြေကုတ်ယူထားသော ပေါ်တူဂီ ခေါင်းဆောင် ဒီဗရစ်တိုကို အနိုင်တိုက်ယူပြီး ကွက်မျက်၍ ကျန် ပေါ်တူဂီလူမျိုးတို့နှင့် ၎င်းတို့၏ သားမယား အဆက်အနွယ် အပေါ်တူဂီ ခရစ်ယာန် လေးထောင်ကျော်ကို အင်းဝသို့ သုံ့ပန်းအဖြစ် ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။
သာလွန်မင်းသည် (၁၆၃၅)ခု ၌ ဒတ်ချ်ကုန်သည်များ ဖြစ်သော ဒီရက်စ်တွိုင်းရဲ နှင့် ဗီဒယဲရတ်ဆိန် ပေါပတာ (Dirck Steur and Wiert Jansen Popta) တို့ကို ဆက်သွယ်ခဲ့သည်။ ၎င်း အချိန်မှာပင် ယိုးဒယားသို့ ချီတက် တိုက်ခိုက်ရာ၌ ဖမ်းဆီး ရမိခဲ့သည့် အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ်၊ ဒတ်ချ်တို့ကို မူလ ရှိရင်း ပေါ်တူဂီများနှင့်အတူ နေရာ ချထားခဲ့သည်။ နိုင်ငံခြား စစ်အကျဉ်းသားများသည် လူဦးရေတိုးပွားလာပြီး အင်အားကောင်းလာရာ စိုးရိမ်တော်မူသဖြင့် စစ်မှုထမ်းဖို့ တစ်ချို့ကို ချန်ထားပြီး ကျန်ရှိသူများကို ချင်းတွင်းမြစ် အရှေ့ဘက်ကမ်းရှိ ပရိမ္မရွာသို့ ပို့ခဲ့သည်။ ယင်းနောက် ချင်းတွင်းမြစ်နှင့် မူးမြစ်ကြား တဝိုက်ရှိ ရွာများ၌ အစုခွဲ၍ မိမိတို့ ဘာသာကို လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ပြီး အခြေချ နေထိုင်ခဲ့စေခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ "ဘုရင်ရဲ့ မိတ်ဆွေ" ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသော ဘုရင်ဂျီရွာများ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ လစ္စဘွန်းမြို့ (၁၆၉၅) မှ ဘုန်းတော်ကြီး ဩဂုတ်စတင်း ဒေဂျေဇူး (Fr.Augustin De Jesu) ရေးခဲ့သော မှတ်တမ်းတွင် (၁၆၃၅) ခုနှစ် သူ အင်းဝ ရောက်စဉ်က သံလျင်မှ ဖမ်းလာသော ကက်သလစ် ခရစ်ယာန် (၄၀ဝ၀) ကျော်ကို အင်းဝ၌ တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
အေဒီ-၁၇၁၉ ခုနှစ် ပုပ် ရဟန်းမင်းကြီး ဧကဒသမမြောက်ကလဲမင်းကနေ တရုတ်ပြည် ကန်တုံမြို့ကို Rev. Msgr. Carlo Ambrogio Mezzabarba ဦးဆောင်တဲ့ ဘာသာရေးသံတမန်အဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့ စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ထိုအဖွဲ့သည် ကပ္ပလီပင်လယ်ကို ဖြတ်ပြီး အပြန်ခရီး ဆက်ခဲ့ကြစဉ် မြန်မာပြည်ကို ဖြတ်သွားခိုက် ပဲခူးမြို့တော်နှင့် အင်းဝနေပြည်တော်တွင် ဘုရင်ဂျီဘာသာဝင်များရှိနေခြင်းသည် နှစ်ပေါင်း(၁၅၀)ကျော် ကြာပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်များလည်း လိုအပ်နေကြောင်း သိရှိရသောကြောင့် သူတို့၏ အဖွဲ့ထဲမှ ဘာနာဘိုက် ဂိုဏ်းဝင်ဘုန်းတော်ကြီး Sigismondo Maria Calchi ကို ထားရစ်ခဲ့ပြီး၊ ပထမဦးဆုံး မြန်မာပြည် ကက်သလစ် သာသနာ ဦးစီးမှူး တာဝန်ခံအဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ (၁၇၂၈) ခုတွင် ဖာသာရ်ပီအိုဂါလီဇီးယား မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ တနင်္ဂနွေမင်းက သန်လျင်တွင် ဘာသာရေး သင်ကြားခွင့် ဟောပြောခွင့် ဘုရားကျောင်းဆောက်ခွင့်များ ပေးခဲ့သည်။ ၁၇၄၃ ခုတွင် မွန်ဘုရင် သမိန်ထောက ဖာသာရ် ဂါလီဇီယားအား ဘာသာရေး သင်ကြားခွင့် ဟောပြောခွင့်၊ ဘုရားကျောင်း ဆောက်ခွင့်များ ပေးသည်။ ပဲခူးတွင် သာသနာပြုများအတွက် နေအိမ်ဆောက်လုပ်ရန်နှင့် ဘုရားကျောင်းဆောက်ရန် ဘုရင်က မြေနေရာ ပေးခဲ့သည်။
သက္ကရာဇ် ၁၁၁၇၊ (အေဒီ-၁၇၅၆ )ခုနှစ်တွင် မွန်များကို ကူညီဖို့ သံလျင်သို့ ရောက်ရှိလာသော ပြင်သစ် စစ်သင်္ဘော နှစ်စီးကို အလောင်းဘုရားက အနိုင်ရလိုက်ပြီး ပြင်သစ် စစ်သုံ့ပန်းများအား ဘုရင်ဂျီရွာများသို့ ပို့လိုက်ကြောင်း ကက်သလစ်ရာဇဝင်နှင့် ကျောင်းသုံး မြန်မာရာဇဝင်တို့တွင် တွေ့ရှိရသည်။ ဆင်ဖြူရှင်မင်းလက်ထက် (၁၇၆၈) ခုတွင် ဖြစ်ပွားသော တရုတ်မြန်မာစစ်တွင် ဘုရင်ဂျီ (ခရစ်ယာန်)များ စစ်မှုထမ်းကြရသည်။ ပြင်သစ်လူမျိုး ချီဗားလီယားမီးလပ် ဦးဆောင်သော ဘုရင်ဂျီတပ်သားများသည် ရဲဝံ့ ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်၍ တရုတ်မြန်မာစစ်ပွဲတွင် မြန်မာတို့က အောင်ပွဲ ခံရသည်။ ဖာသာရ်ပဲရ်ကော်တိုသည် ဘုရင်ဂျီ စစ်သားများကို လိုက်လံ စောင့်ရှောက်ရသည်။ ချီဗားလီးယားမီးလပ်သည်လည်း နန်းတော်တွင် ဩဇာရှိသူ တစ်ဦးဖြစ်လာပြီး ဆရာတော် ပဲရ်ကော်တိုသည်လည်း ဘုရင်၏ ဦးစားပေးခြင်း ခံရသည်။ (၁၇၆၉)ခု နိုဝင်ဘာလ (၃)ရက် နေ့စွဲနှင့် ဆရာတော်ပဲရ်ကော်တိုရေးသော စာတွင် တရုတ်မြန်မာစစ်ပွဲ တရုတ်တို့ကို အနိုင်ရပြီးနောက် ကျွန်ုပ်သည် အင်းဝ၊ နဘက်၊ ရွှေဘိုသို့ ပြန်လာခဲ့သည်။ ထူးထူးခြားခြား မှတ်တမ်းတင်ရမည်မှာ မြန်မာအက္ခရာ ခဲစာလုံးကို စမ်းသပ် တီထွင်ပြီး အေဒီ-၁၇၇၆ Pope PiusVI လက်ထက် ရောမားမြို့မှာ ပထမဆုံး အောင်မြင်စွာ ပုံနှိပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆရာတော် Percoto သည် ပိဋိကတ် (၃) ပုံမှ တချို့ကို အီတလီဘာသာသို့ ဘာသာပြန်ဆိုနိုင်ခဲ့သည်။ အေဒီ-၁၇၇၀ ခုနှစ် မုံလှရွာတွင် ပထမဆုံး ရဟန်းဖြစ် သင်တန်းကျောင်းကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ၁၇၉၃ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ တိုင်းရင်းသားများထဲမှ ပထမဦးဆုံး ရဟန်းတော် (၃) ပါးကို မွေးထုတ် ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ထိုသူတို့မှာ ချမ်းသာရွာ ဇာတိ Fr. Joseph မောင်မောင်ကြီး၊ ချောင်းရိုးသား Fr. Andrew မောင်ကိုး နဲ့ ရန်ကုန်မှ Fr. Ignatius di Britto တို့ဖြစ်ကြသည်။
တောင်ငူကို အခြေပြုပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့ဘက်ခြမ်းကို ဆရာတော် Biffi မှ တာဝန်ယူကာ အထက်မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဆရာတော် ဘူးဒွန်း မှ တာဝန်ယူရသည်။ ဆရာတော် ဘီဂန်းဒက်မှ အောက်မြန်မာပြည်ကို တာဝန်ယူသည်။ တခြား သာသနာပြု အသင်းဂိုဏ်းများကိုလည်း ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ တောင်ကြီး၊ ကျိုင်းတုံဒေသသို့ အီတလီနိုင်ငံမှ PIME (ခေါ်) နိုင်ငံရပ်ခြား သာသနာပြု အသင်းဂိုဏ်း လာရောက်ခဲ့ကာ၊ ကချင်ပြည်နယ်သို၌ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံမှ St. Columban အသင်းဂိုဏ်း လာရောက် သာသနာပြုခဲ့ကြသည်။ ပုသိမ်၊ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနှင့် ချင်းတောင်ဒေသသို့ MEP အဖွဲ့မှဆက်လက် တာဝန်ယူသည်။ ဘာသာရေးတင်မက၊ ပညာရေးအတွက်လည်း ကျောင်းသုံး စာအုပ်တွေ၊ အဘိဓာန်တွေ၊ ဘာသာပြန်စာပေနဲ့ ကျမ်းအမျိုးမျိုးကို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ နောက်ထပ်လည်း ဆရာတော်များသည် သူတော်စဉ်ဂိုဏ်းများကို ဖိတ်ကြားပြီး အားဖြည့်ခဲ့သည်။ ၁၈၆၇ ခုနှစ်တွင် ကောင်းသော သိုးထိန်းသီလရှင် ဂိုဏ်းသည် ရန်ကုန်၌ အမျိုးသမီးကျောင်း ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၁၈၇၄ ခုနှစ်တွင် တိုင်းရင်းသူများသာ ပါဝင်သော St.Francis Xavier သီလရှင် ဂိုဏ်းကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး၊ ၁၈၈၉ ခုနှစ်တွင် Franciscan သီလရှင်များသည် မန္တလေး မနော်ရမန်၌ အနာကြီးရောဂါသည်များအတွက် ဆေးရုံဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြန်မာနိုင်ငံရှိ_ရိုမန်ကက်သလစ်_ခရစ်ယာန်ဘာသာ&oldid=706179" မှ ရယူရန်